Thawngno | Siyin Chin Baptist Church
Hesuakna hang in ngupna kinga
Posted by thawngno ⋅ July 3, 2011 ⋅ Leaveacomment
ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတိုင်း ကျေးဇူးတော် (grace) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကို နေ့တိုင်းနီးပါး ကြားလေ့၊ သုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော် သက်သက်ကြောင့် နေကောင်း ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတော်သက်သက်ကြောင့် အောင်မြင်ခြင်း အခွင့် ရပါတယ်….စသဖြင့်ပေါ့…. နောက်ပိုင်း သုံးဖန်များ လာတော့ ကျေးဇူးတော် ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အတိမ်အနက်၊ စစ်မှန်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှ တိမ်ကောလု မတတ်၊ ပျောက်ကွယ် လုနီးနီးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတုံးက ကျမ်းစာကျောင်းတစ်ခုရဲ့ စာချ ပုဂ္ဂိုလ် ပရော်ဖက်ဆာဆရာကြီး တစ်ပါးက ကျောင်းသားတွေကို ကျေးဇူးတော် (grace) နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်အထိ နားလည်သဘောပေါက် သလဲဆိုဒါကို လက်တွေ့ကျကျစစ်ဆေးချင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ အတန်းတင် (final) စာမေးပွဲ မှာ စစ်ဆေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Posted by thawngno ⋅ June 1, 2011 ⋅ Leaveacomment
Posted by thawngno ⋅ May 26, 2011 ⋅ Leaveacomment
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဂျိုးလ်အော်စ်တင်သည် သူ၏ ဖခင်ထံမှ Lakewood ဘုရားကျောင်း (အသင်းတော်) နှင့် ထိုအသင်းတော်၏ ရုပ်မြင်သံကြားသာသနာလုပ်ငန်းကို အမွေအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ထိုအသင်း တော်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားသာသနာလုပ်ငန်းများကို သူ၏လက်ထက်တွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်အောင်ထပ်ချဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် တွင် အလွန်ရေပန်းစားခဲ့သော စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရေးသားပြုစုခဲ့သည့်အပြင် သူ၏နှစ်လိုဘွယ်အပြုံးမျက်နှာ ပုံနှင့် “live at your full potential” တရားတော်သည် အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အော်စ်တင်က “ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာအောင်မြင်တိုးတက်မှုတို့ကို မျှော်လင့်သောသူများ ကို ဘုရားရှင်အထူးသဘောကျသည်” ဟုဆိုသည်။ အော်စ်တင်သည် ကောလိပ် သို့မဟုတ် ကျမ်းစာကျောင်းတခုခုမှ မည်သည့်ဘွဲ့ကိုမျှရရှိခဲ့ဖူးခြင်းမရှိပေ။
Posted by thawngno ⋅ May 20, 2011 ⋅ Leaveacomment
PDF Version “I take great pride in and highly appreciate the fact that our people have overcome the ordeals of history and displayed to the full the heroic mettle of the revolutionary people and the indomitable spirit of chuch’e Korea, firmly united behind the party…. No difficulty is insurmountable nor is any fortress impregnablefor us … Continue reading →
Posted by thawngno ⋅ May 16, 2011 ⋅ Leaveacomment
၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ဗာဂျီးနီးယား နှင့်မေရီလင်းပြည်နယ် များတွင် နေထိုင်သူများအတွက် ဟိုင်းဝေးအမှတ် ၄၉၅ မြို့ပတ်လမ်းမကြီး၏ တစ်ခုသော တစ်နေရာ၊ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်း သစ်တောအုပ်ကလေးတစ်ခု၏ အထက်တွင် ကြီးကျယ်ခန်းနားလှသော မော်မွန်တို့၏ ဗိမ္မန်တော်ကြီးတစ်ခု ငွားငွားစွင့်စွင့်ထောင်တက်နေသည့်မြင်ကွင်းမှာ အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူတို့ အခြေခံယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သော ဘုရားသခင်သည်တချိန်တခါကလူသားဖြစ်ခြင်း၊ ယေရှုသည် ဘုရားနှင့် မယ်တော်မာရိဆက်ဆံမှုကြောင့်မွေးဖွားလာခြင်း၊ ယေရှု ဒုတိယအကြိမ် အမေရိကတိုက်ပေါ်တွင် မွေးဖွါးခဲ့ဘူးခြင်း စသော ယုံကြည်ခြင်း နှင့် ထိုဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြားအခြားသော အရာတို့ကို သိရှိသူ အလွန်နည်းသေးသည်ဟု ထင်မိပါသည်။